Dilbata, Guraandhalaa 14, 2016 Local time: 21:53
Hiriirri Mormiis, Hiraarsaa fi Reebichi Humnoota Mootummaas Oromiyaa Keessatti Itti Fufuu Dubbatu, Jiraattonni Godaantoti Itiyoophiyaa Harka Taanzaaniyaa Seenan
Hiriirri Mormiis, Hiraarsaa fi Reebichi Humnoota Mootummaas Oromiyaa Keessatti Itti Fufuu Dubbatu, Jiraattonni Oduu caalaa natti agarsiisi >>
Lubbuu Namootaa Hiriira Mormii Oromiyaa Irratti Bade Laalchisee Yunaaytid Isteets Maal Jetti?i
Lubbuu Namootaa Hiriira Mormii Oromiyaa Irratti Bade Laalchisee Yunaaytid Isteets Maal Jetti?
Yunaaytid ISteets lubbuu namoota mormii Oromiyaa iIrratti badeetif qorannon mootumman Itoophiyaa harka keessaa hin qabne godhamuu qaba jette amantii?
Kaleessa dubbii himaan Ministeerii Haajaa Alaa Biyyitti ( State Department Spokes Person) gaafii armaan olii kanaa gafatamee ture.
Hiriira mormii hawaasa Oromoo waajjira Tokkummaa Mootummootaa fuul-dura,Niiw Yorki,USA
Prezidaantiin Yunaayitid Isteets Baaraak Obaamaan kaleessa kutaa Mariilaand, magaalaa Baaltimoore keessatti Masjiidha tokko ennaa dhaawwatan
✖ Prezidaantii WQO (OSA): Motummaan Itiyoophiyaa ADWUIn Hoogganamu Gaaffii Uummata Oromoo Deebisuu Hin Dandeenye
Hiriirri Mormiis, Hiraarsaa fi Reebichi Humnoota Mootummaas Oromiyaa Keessatti Itti Fufuu Dubbatu, Jiraattonni More
“VOA APP,” fayyadamuudhan oduu ykn wanta naannoo keessanitti ta'aa jiru nuu ergai
“VOA APP,” fayyadamtanii oduu ykn wanta naannoo teessanitti tahe/tahuutti jiraa nuu erguu akka dandeettanii quba qabduu?
Suuraan isan nuu ergitan kuusaa suuraalee VOA Afaan Oromoo keessa keenna. APP, VOA argachuuf kuusaa APP VOA irraa bilbila keessan harkaa irratti waraabbadhaaa.
Isaniin Android fayyadamtan,google play irraa: http://bit.ly/HFZrG6?r=bb
Isaniin IOS fayyadamtan, APPLE Store irraa: http://apple.co/1D6mgLU
Isaniin bilibla NOKIA ka durii fayyadamtan, Binu App Store irraa: http://m.binu.com/voa/
Suraalee nuuf erguuf, xiyya gama mirgaa jiru irraatii mallatto suuraa tuqaa.Achii ammoo barreeffama Haarawaa fudhadhu jedhu tiqaatii suuraa fi qophii barbaaddan waraabaa/kaasaa. Ykn ammoo Kuusaa Keessaa filadhu ka jedhu tuqaatii kuusaa keessa keettan irraa waraabaa.
Mata-duree,qophii waraabdanii fi maqaa keessan irratti barreessaa.Achii ammoo mallattoo Ergi jettu harkaa keessan gama mirgaatiin jirtu tuqaatii ergaa.
Suuran isan nuu ergitan seera qabeessa tahuu isaa eegii mirkanfanneen duubatti kuusaa suuraalee APP VOA keessa keenna.
Gaaffii fi deebii Prezidaantii...
App. sagalee VOA Afaan Cufaa tolaan asi irraa argattu Andirooydiif >> >>
iOS/Ayoosiif >> >>
Bilbila Ismaarti foon hin qabdanii?
Rakkoon hin jirtu!
Asi tuqi WaraabiApp VOA tolaa bilba durii irraa qabdan Gabaasaa Addaa